Otu esi etinye PHP 8 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye PHP 8 na Debian 11 Bullseye
September 9, 2021 August 17, 2021 by Jọshụa James
Ịwụnye PHP 8 maka Debian 11
Bubata & Wụnye igodo GPG:
Bubata & Wụnye ebe nchekwa:
Tinye PHP 8
Wụnye Nhọrọ Modul Apache
Wụnye Nhọrọ Module Apache na FPM
PHP 8 nwere nhọrọ Nginx
PHP bụ otu n'ime asụsụ mmemme ihe nkesa na-ewu ewu na nke a na-ejikarị eme ihe ruo taa n'ahịa. Dabere na ọnụ ọgụgụ webụsaịtị PHP, na 2021, a ga-eji ya 79.1% nke niile mara weebụsaịtị dị ka W3Tech, na mbipute 7.0 usoro na-eme ka nnukwu na 65.6% òkè ahịa. Ọtụtụ CMS na-ewu ewu na frameworks dị ka WordPress, Magento, na Laravel mmepe gụnyere ọtụtụ PHP frameworks.
Ntọhapụ PHP kacha ọhụrụ ruo taa bụ usoro 8. PHP 8 bụ mmelite dị mkpa nke asụsụ PHP. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na nkwalite ọhụrụ, gụnyere arụmụka akpọrọ aha, ụdị otu, njiri mara, nkwalite ihe nrụpụta, nkwupụta egwuregwu, onye na-ahụ maka nchekwa efu, JIT, nkwalite n'ụdị sistemu, njikwa njehie na nkwụsi ike.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye ebe nchekwa ọhụrụ site n'aka onye na-elekọta Debian Ondřej Surý ma wụnye PHP 8.0 ma wụnye ụdịdị n'ọdịnihu dị ka PHP 8.1 na-abata.
Ngwungwu achọrọ: wget
Ị ga-mkpa inwe ngwugwu ndị a arụnyere maka nkuzi a. Mezue iwu a ka ịwụnye:
Rịba ama, ọ bụrụ na ejighị n'aka, mee iwu ahụ n'agbanyeghị; ọ gaghị emerụ sistemu gị.
Nzọụkwụ mbụ bụ mbubata na wụnye ihe igodo GPG tupu ịtinye ebe nchekwa. Iji mee nke a, jiri ọnụ na-esonụ (Ctrl+ALT+T) iwu:
Mara, ị nwere ike ịwụnye ndabere ndị a ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu:
Iji hazie igodo GPG, oge eruola ịgbakwunye ya Ondřej Surý repository dị ka ndị a:
Ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu ịwụnye PHP 8 maka mkpa gị dị ka ndị a:
Iji tinye PHP 8 dị ka modul Apache, tinye iwu a.
Ozugbo echichi mechara, malitegharịa ihe nkesa Apache gị maka ibunye modul PHP ọhụrụ.
PHP-FPM (acronym nke FastCGI Process Manager) bụ PHP ọzọ na-ewu ewu (Ihe nhazi Hypertext) FastCGI mmejuputa.
Iji tinye PHP-FPM maka Apache 2, jiri iwu ndị a.
Mara, na ndabara, PHP-FPM adịghị enyere Apache aka. Ị ga-emerịrị ya site n'iwu a.
N'ikpeazụ, malitegharịa Apache.
Chọpụta na PHP-FPM na-arụ ọrụ:
Nginx enweghị nhazi PHP nke ala dịka ụfọdụ sava weebụ ndị ọzọ dị ka Apache. Ị ga-achọ ịwụnye PHP-FPM "onye njikwa usoro fastCGI" ijikwa faịlụ PHP.
Iji tinye PHP 8 na Nginx, jiri iwu a:
Ugbu a, gosi na ọ na-agba ọsọ:
PHP 8 bụ nkwalite karịa 7.4, yana ngwa ngwa ihe na-atọ ụtọ n'etiti ọtụtụ atụmatụ. Agbanyeghị, ị ga-amarịrị na anaghị ewere ya dị ka “ngwa ngwa tozuru oke” ma e jiri ya tụnyere PHP 7.4. Ị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ngwanrọ ọkacha mmasị gị dị ka WordPress ma ọ bụ Plugins/Themes maka ngwa CMS nwere ike ịgbagha.
Mee ụfọdụ nyocha, kwadebe, ma tinye 7.4 ma dị njikere iji dochie anya ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-ezighị ezi mgbe ị na-eme mgbanwe ahụ, dịka 7.4 ka na-arụsi ọrụ ike na ngwugwu na-agbanye n'otu oge yana ngwugwu 8.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, PHP Mail igodo
Otu esi etinye mmanya na Linux Mint 20
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Debian